Shina: Vinaingitra simika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Aogositra 2011 17:01 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, русский, Magyar, Français, македонски, বাংলা, Italiano, English
Nisy tatitra avy any an-toerana nampahafatatra fa ny 90% ny vinaingitra eny an-tsena dia novokarina avy amina asidra “acetic”mangatsiaka (Avy amin'ny mpamoaka lahatsoratra : acide acetique tsy mitapoka) raha tokony ho natao avy amin'ny voan-javatra.
Araka ny tatitra [zh] ao anatin'ny First Financial Daily, ny salan'isan'ny fanjifàna vinaingitra isan-taona dia ambonin'ny 3.3 tapitrisa taonina ary ny 90% dia fangaro simikan'ny asidra “acetic” mangatsiaka, rano sy ny fanampiny hafa. Ny teny “Taharonà Vinaingitra” (勾兌醋) dia lasa teny iray be mpikaroka indrindra nandritra ireo andro vitsy lasa.
Ilayy mpampiasa ny sehatra fifampiresahana Egugu, Bean Eyes dia mampitandrina [zh] ireo mpanjifa hafa momba ny taharon'ny vinaingitra simika:
Araka ny lalàna, tsy maintsy mampiasa asidra “acetic” mangatsiaka fihinana izy ireo, nefa ny orinasa madinika sasany dia mampiasa asidra “acetic” mangatsiaka vokatra indostrialy. (Mitovy amin'ny vidina barika 2.5 amin'ny asidra “acetic” mangatsiaka vokatra indostrialy ny vidina barikana asidra “acetic”mangatsiaka fihinana iray). Tsotra tokoa ny taharo, afangaro fotsiny ny asidra “acetic” mangatsiaka sy ny rano dia vita.
Tsy maintsy mandalo ny zotran'ny fanasitiliana ny asidra “acetic” mangatsiaka fihinana ary tsy manimba. Nefa tsy mitondra zava-tsoa ho an'ny vatan'olombelona izany, rano misy asidra fotsiny, fa tsy vinaigitra. Manana vy mavesatra sy methanol ny asidra “acetic” vokatra indostrialy, izay hitarika ny fanaintainan'ny ozatra ary mety hahatonga fahajambana, fahasimban'ny rà, firaiketan'ny vavony sy ny tsinay. Ny fihinanana mandritra ny fotoana maharitra dia mety hitarika amin'ny homamiadan'ny avokavoka sy ny vavony.
Any Sina Weibo, miseho anatin'ireo adi-hevitra maro ao amin'ny vaovao androany ny olan'ny “taharon'ny vinairgitra”. Eto ambany ny dikantenin'ireo [zh] tsikera voafantina avy amin'ireo vaovao ao amin'ny Global Entrepreneur Magazine :
Searching for happiness (Mitady fifaliana): Tsy zava-baovao ity. Anatinà rafitra tsy misy fandinihana ny kalitao, anatinà orinasa izay ny vola ihany no mahasarika, inona no mbola antenaintsika? Raha tsy afaka manova ireo fepetra etsy ambony isika dia hahazo zava-mahatalanjona maro dia maro.
Li Jinli: Tsy dia tsiambaratelon'ny fandraharahana loatra ity. Ny olana dia tsy misy na iray aza dingana iray hifehezana ny zava-misy. Ny volan-ketrantsika dia lany amin'ny famahanana alika.
Spiritual mountain (tendrombohitry ny fanahy) : Tsy misy na dia sakafo iray aza azontsika hohanina ampahatokiana. Mba karazana tontolo inona no iainantsika? Angamba tokony havaditsika ho trano fanaovana fanandramana ny lakoziantsika ary andramana aloha ny sakafo alohan'ny hahandroantsika azy.
Cao-min: “Fa ahoana loatra no mahatonga antsika ho tottry ny sakafo simika toy izao”. Manontany tena aho raha manana tahaka izany koa ireo firenena hafa? Miandràndra fanazavana.
Zou Xiaobing: Fanontaniana mifanohitra amin'izay: Afaka miteny aminay ve ianao hoe inona no azonay hohanina ampahatokisana ankoatra izay?